Banyere Anyị - Changzhou Yasen Electronic Co., Ltd.
Ihe ị chọrọ, anyị nwere ike hazie ugboro, logo, agba, udi
O siri ike inweta mgbochi-ezu ohi ngwọta maka ụfọdụ ngwongwo mgbe ụfọdụ. Yasen bụ obi ụtọ na-enye imewe ihe ngwọta maka ndị a ngwongwo free dị ka ndị ahịa 'chọrọ.
Yasen specializes na R & D, na-amị na ahịa EAS ngwaahịa. Yasen nwere na nso nke EAS ngwaahịa: RF / M ike mkpado, RF / AM labelụ EAS RF / AM nche usoro, EAS detacher wdg
Ngwa gụnyere ọkụ na ngwá, textiles, akpụkpọ ụkwụ na Ahịa. Anyị na ngwaahịa na-ewu ewu na anụ ụlọ na ndị mba ọzọ ahịa.
Yasen nke nwetara ISO9001 akwụkwọ, OA akwụkwọ na SGS akwụkwọ maka EAS usoro. A ukwu nke ngwaahịa na teknụzụ-enwe patent nchebe.
Kemgbe afọ OF 2001
KWA AFỌ ahịa
Professional na-anụ ọkụ n'obi R & D otu enyere Yasen aka anyị na ndị ahịa na fashionable na ihe imewe. 10 mmepụta edoghi ọnụ na a zuru set nke mbụ mmepụta ụlọ ọrụ, na ngwá na-anwale ngwá nwee Yasen inye ngwaahịa nke a pụrụ ịdabere na àgwà na-asọmpi price ka anyị na ndị ahịa na-adọ.
Yasen nwere ike 100 nde iberibe EAS tags na 800 nde iberibe AM kpọọ kwa afo.
All ngwaahịa na-emepụta na-anwale nditịm dị ka mba na mba ọkọlọtọ.
Gịnị ahịa ekwu?
Anyị anọwo na Yasen maka n'elu 2 afọ na ha anọwo na-ghar na-achọ mgbe anyị azụmahịa. Ha price àjà na ahịa ọrụ ndidi magburu onwe, na-eme anyị na-arụ ọrụ rụọ ọrụ nke ọma. --- Titan Thompson
Yasen bụ mgbanwe ngwaahịa enyeworo anyị na-akara anyị ịzụta ebe mbenata-akwụ ụgwọ. Yasen nyewokwara anyị aka wụnye EAS mkpu usoro na saịtị. --- Joy Jansen
Ọ nọwo na-a n'ezie ihe obi ụtọ na-arụkọ ọrụ na Yasen Co. ha ezi obi na-arụ ọrụ na ndị ọrụ ha mma ha na ngwaahịa ndị isi atụmatụ nke ụlọ ọrụ. Ga-amasị m ịgbatị m ekele Yasen otu maka ha oké nkwado karịrị afọ anyị nwere ohere iji na-akwado ha. ------- Amari Wilder
Great imekọ ihe ọnụ na Yasen karịsịa ndị enyi Ben. Ben bụ n'ezie a ọma Ihọd; anyị aghaghị inwe n'ihu imekọ ihe ọnụ ------ Jamie Smith
Magnetik Key Detacher , Mini Eas Detacher , Security Detacher Cap , Optical Tag Detacher , Eas Glass Tag Detacher , Glass Tag Detacher ,